भाग्यमानी छोरो : भाग ३ [Previous Episode] क्रमश…
जगिङ्गबाट फर्कदा बुबा पसलमा चिया पिउँदै ग्राहकहरुसँग गफिंदै हुनुहुन्थ्यो । म सरासर माथी उक्लिएँ, रुबीना ढोका खुल्लै राखेर आफ्नो पढाई गर्दैथिई भने आमा अझै पनि र्याप नाईटरोबमै किचनमा खाना बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो । म नुहाएर बाहिर निस्कदा आमाले मेरो कोठामा नास्ता लिएर आउनुभएको थियो, म मात्र टावलमा थिएँ । मैले सोधें “रुबीनाले खाई नास्ता ?” आमाले प्रत्युत्तरमा “अँ अघिनै खाईसकी ! तँ जस्ती हो त ? आज आमाको मुख हेर्ने दिन भनेर बिहानै मलाई मिठाई र के-के पो गिफ्ट देकी छे…” भन्नुभयो । मैले आफ्नो शरिरबाट टावल हटाएर आमालाई भनें “मेरो तर्फबाट हजुरलाई मेरो ललिपप गिफ्ट... खाए पनि हुन्छ, लगाए पनि हुन्छ; अनि खेलाए पनि हुन्छ ।” आमाले प्रत्युत्तरमा “बिहान बिहानै काम छैन तेरो” भन्नुभयो । तर, मेरो लाँडो समाएर हल्का खेलाउँदै भन्नुभयो “पढाई पनि त पुरा गर्नुपर्यो नि ? यो त छदैँछ नि मेरो लागि काहाँ भागेर जान्छ र ?” भन्दै मजाले मुठ्याइदिनुभयो । मैले आमालाई च्याप्प समाएर आफूसँग टाँसे र आमालाई अन्धाधुन्द किस गर्न थालें, । किस गर्दागर्दै मैले आमाको र्याप नाईटरोबको फिता खोलेर पोका खेलाउँदै आमाको कानमा फुसफुसाउँदै भनें “मेरी सेक्सी आमा ।” आमाले पनि “तेरो लागि सिंगो रात छदै छ नि किन टेन्सन लिन्छस् ?” मैले फुसफुसाउँदै भनें “आज त बुबाले रक्सी नखानुहोला ? हिजो त्यस्तरी पिएर आउनुभाथ्यो... बुबाले नपिएपछी त तपाईंलाई फुर्सदै पो कहाँ हुन्छ र ?” “धन्दा नमान् तेरो बाले बाहिर नपिई आएछन् भने म यहीं रक्सी ख्वाएर लठ्याईदिन्छु नि ।” मैले आमाको पुतीमा औंला छिराएर भनें - “बुढीमाउको पुतीलाई छोराको लाँडोले मोहनी लाएजस्तो छ । एकचोटी चुसेर स्वर्ग देखाइदिनुन त मेरो लाँडोलाई... ।” आमा सरक्कै तल भुईमा घुँडा टेकेर मेरो लाँडोलाई मुखमा राखेर चुस्न थाल्नुभयो । लगभग दुई मिनटेजसो चुसेपछी मेरो लाँडो छोडेर मेरो ओंठमा किस गर्नुभयो र भन्नुभयो “ल ! भयो म किचनमा जान्छु... तँ नास्ता गर !” अनि चाक मर्काउँदै आमाले र्याप नाईटरोबको फिता बाँध्दै बाहिर निस्कनुभयो ।
मैले पनि कपडा पहिरेर आमाले ल्याईदिनुभएको नास्ता खाएँ अनि स्कुलको काम गर्न थालें । स्कुलबाट दिउँसो लगभग सवा तिनबजे फर्केर आउँदा बुबा पसलमै हुनुहुन्थ्यो, रुबीना र म दुवै माथी उक्लियौं । आमा टि.भी. हेरिरहनुभएको थियो । रुबीना आफ्नो कोठामा लागि म आफ्नो कोठामा झोला राखेर सोफामा आइपुगें र आमामाथी नजर लगाएँ, वाऊऽऽऽ... आमाले त खैरो र्याप ड्रेस लगाउनुभएको रहेछ । भित्र छिर्नासाथ मेरो मुखबाट निस्कि त हाल्यो “वाऊऽऽऽ... आमा ! आज त पुरा मुडमा हुनुहुन्छ कि क्या हो ?” रुबीनाले मलाई फर्केर एक नजर हेरी अनि आमाले पनि मलाई हेर्दै भन्नुभयो “कपडा नौलो लाएँ भन्दैमा जे पायो त्यही बोल्छस् !” म पनि आफ्नो कोठामा गएर कपडा फेरेर आएँ । रुबीना किचन टेबुलमा बसिरहेकी थिई । म सरासर आमाको पछाडी गएर आमालाई अँगालो हालेर काननिर मुख लगेर फुसफुसाउँदै भनें “के हो आमा ! आज त मलाई ठहरै पार्नुहुन्छ कि क्या हो ?” अनि एउटा हात आमाको र्याप ड्रेसको भित्र छिराएर बुब्स समाउँदै भने “सजिलो कपडा रै’छ !” त्यसपछी आमाको कमरनेरबाट हात घुसाएर पुतीसम्म पुर्याएर फेरी भनें “सोचेभन्दा सजिलो रै’छ ।“ त्यसपछि म आएर रुबीनाको अगाडी बसें । आमाले हामीलाई ब्रेड अमलेटको साथमा चिया दिनुभयो र आफूपनि हामीसँगै खाजा खानुभयो । मैले सहजै भनें “आमा ! पहिले त यस्तो कपडा लगाएको देख्या थिईन त मैले । जे होस्, सुहाउँदो रै’छ तपाईंलाई ।” आमाले स्पष्टिकरण दिनुभयो “तेरै बहिनीले ल्याईदिएकी त हो, पहिला कहिल्यै लगाएको थिईन यस्तो कपडा, आमाको मुख हेर्ने भनेर देकी नलगाईदिए रिसाउली भन्ने डर ।” “अनि बुढीमाऊ बिचार गर्ने भन्दैमा राती लगाउने कपडालाई दिउँसै लगाउँछन् त ?” आमा रातो-पिरो हुनुभयो । रुबीनाले आमाको बचाउ गर्दै भनी “त्यतिकै राती लगाउने भन्दिनुहुन्छ दादा पनि ! केटीहरुले दिउँसै लगाएर हिँड्छन् त हामीलाई पो समाजमा कुरा काट्ने भएर हो त ? म पनि यस्तै लगाउँछु नि, त्यसमाथी आमाले घरबाट दुई पाईला बाहिर निस्केको मलाई थाहा छैन । भित्र लगाउँदा के फरक पर्छ र ?" “जे होस् आमा यो कपडामा निकै हट देखिनुभा’छ, आमाको सट्टा अरु कोही भा’को भए...?” “आमाको सट्टा अरु कोही भा’को भए के गर्नुहुन्थ्यो दादा !” रुबीनाले हाँस्दै सोधी, उत्तरमा मैले झ्वाट्टै भने “सबै कुरा तँलाई भन्नुपर्छ र ? के के गर्थें के के नि !” आमाले प्रतिवाद गर्दै भन्नुभयो “छ्या ! कुरा गर्ने पनि एउटा तरिका हुन्छ नि ? आमाको अगाडी जथाभावी छिल्लिन्छस्...!” म आमाको छेउमा पुगेर आमालाई अँगालोमा लिएर भने “रुबीना ! हाम्री आमा यो कपडामा क्या प्वाँट देखिनुभा’छ है !” अनि आमाको कमरमा हात बेरें, रुबीनाले पनि मलाई साथ दिदैं भनी “मैले पनि यस्तै कपडा लगाएँ भने त आमा र मलाई दिदी-बहिनी भन्छन् होला है दादा ?” “हो ! तर एउटा कुरा भन्नु त आमा ?” “के भन् त ?” “यसरी सेक्सी देखिन्छु भन्दैमा ब्रा पनि नलगाई बस्छन् त ?” आमाले मेरो कपाल चुल्ठ्याउँदै गाली गरेजस्तो गर्नुभयो “जे पायो त्यही कुरा गर्छ आफ्नी आमासँग...! जा गएर पढ्न बस् ! अनि तँ के हेरेर बसेकी छेस् तँ पनि जा !”
त्यसपछाडी रुबीना आफ्नो कोठामा जानको लागि उठी भने म पनि आफ्नो कोठामा जानलाई उठें । यहीँ मौकामा मैले आमालाई जिस्क्याउँदै भनें “आमाले त पेन्टी पनि लगाउनु भा’छैन होला ? आज बुबालाई ठहरै पार्नुहुन्छ कि क्या हो ?” रुबीनाले फरक्क फर्केर मतिर हेरी र हाँसी अनि आफ्नो कोठामा छिरी, म पनि आफ्नो कोठामा छिरें अनि पढाईलाई निरन्तरता दिन थालें ।
साँझको खाना खाएपछी रुबीना र म टि.भी. हेरिरहेका थियौं । आमा भान्साको सबै काम सकेर आइपुग्नुभयो र हामीसँगै टि.भी. हेर्न थाल्नुभयो । संयोगले आमा मेरो छेउमा नै बस्नुभएको थियो । सवा नौ बज्दासम्म रुबीनाले हेर्ने गरेको सिरियल सकियो र रिमोट मलाई दिई । मैले स्पोर्टस् च्यानल लगाएँ । आइमाईको रेस्लिङ्ग आइरहेको थियो । प्राय: रेस्लिङ्ग हेर्दा एउटा गेम आइमाईको अवस्य हुन्थ्यो र कहिलेकाँही अलि भल्गर नै पनि हुन्थ्यो । आज संयोगले ब्रा-पेन्टी म्याच आइरहेको थियो । जस्तै भएपनि त्यहाँ सेन्सर गरिएको हुन्थ्यो । रेस्लिङ्ग हेर्दै गर्दा रुबीनाले भनी “ह्या दादा ! कत्ति रेस्लिङ्ग मात्रै हेर्नुहुन्छ । आज शुक्रबार पनि हो केबुलमा राम्रो राम्रो मुभिज दिएको होला हेरौं न” भनी । मैले रिमोट फेरि रुबीनाको हातमा थमाईदिएँ र रुबीनाले च्यानल परिवर्तन गरेर लोकल केबुल लगाई । कुन फिल्म हो थाहा भएन तर एउटी केटी स्कुटर लिएर कतै गइरहेको सिन आयो । बाटोको बिचमा पुगेपछी उसको स्कुटर रोकियो र नचल्ने भएपछी उसले त्यसलाई घिसार्ने कोसिस गरि र नसकेपछि उसले चारैतिर हेरि । केहिबेरमा एकजना मान्छे उसको नजिक आयो र कुराकानी गर्यो अनि स्कुटरलाई केहि गरेजस्तो गर्यो । स्कुटर फेरीपनि स्टार्ट नभएपछी उसले स्कुटरलाई घिसारेर कुनै घरभित्र छिरायो अनि केटीले धन्यवाद् जस्तो अभिवादन गरि । केटोले केहि कुरा गर्दागर्दै केटिको हात समायो र त्यहींनै किस गर्न थाल्यो । केटीले पनि केटोलाई साथ दिन थाली । किस गर्दागर्दै केटोले केटीको बुब्समाथी हात लगेर मसल्न थाल्यो र स्क्रिनको माहौल रंगिन भयो । निकैबेर किस गर्दै शरिरसँग खेल्दाखेल्दै केटोले केटीको टि-शर्टभित्र हात छिराएर चलाउन थाल्यो । सँगै केटीले पनि केटोको पेन्टको जिपरमाथी हात दलिरहेको थियो । त्यतिकैमा केटीले केटोको हात समाएर ढोकाभित्र छिराई, अचानक सिन चेञ्ज भयो र स्क्रिनमा केटा र केटी दुवै नाङ्गै एकार्कालाई सिक्स्टि-नाइन पोजिशनमा चुम्माचाटी गरेको सिन आयो । रुबीनाको अनुहार रातो पिरो भईसकेको थियो, आमा अक्क-न-बक्क पर्नुभएको थियो भने म निकै उत्तेजनामा आइसकेको थिएँ ।
यत्तिको सिन त अंग्रेजी फिल्ममा सामान्यनै हुन्थ्यो तर जब केटोको लाँडोको छाला फर्काउँदै केटीले आफ्नो मुखमा हुलेर जोडजोडले चुस्न थाली रुबीना त्यहाँबाट भागेर आफ्नो कोठामा गई र ढोका ढ्याम्म लगाई । म एकोहोरो स्क्रिनमै मस्त थिएँ । आमा पनि मुर्तिझैं स्क्रिनमै मस्त हुनुहुन्थ्यो । न हामीले च्यानल चेञ्ज गर्यौं न टि.भी. बन्द गर्यौं न आफ्नो कोठातिरनै लाग्यौं । केहिबेरपछी केटोले केटीको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न सुरु गर्यो र चिकाईको आवाजले कोठा गुञ्जायमान हुन थाल्यो । मलाई थाहा भएन स्क्रिनमा कतिखेरसम्म उनीहरुको चिकाचिकी चल्यो तर जब केटोले केटीको बुब्समा फुसी झार्यो अचानकसँग टि.भी. बन्द भयो । रुबीनाको हातमा रिमोट थियो र रुबीना अति नै क्रोधित मुद्रामा थिई । आवाज ननिकालीकन रुबीना आफैंमा फतफताइरहेकी थिई । अन्तमा माहोल अलि सहज भएकोजस्तो मानेर होला रुबीनाले आमालाई भनी “यो केबुल वालालाई कम्प्लेन गर्नुपर्छ । यस्तो पनि कहिं गर्छन्...” अनि आमाको हातमा रिमोट थमाई ।आमाले पनि “तँलाई जान्ने भएर फिल्म हेर्नुपरेको नि ? ओर्कोले रेस्लिङ्ग हेरेको रिस गरिथिस् ।” केहि बेरसम्म हामी तिनैजना मौन बसिरह्यौं । निकैबेरपछी आमाले स्थितीलाई सहज बनाउँदै भन्नुभयो “ल अब च्यानल चेञ्ज गरेर हेरौंला नि त ।” अनि आमाले फेरी रिमोटको स्विच अन गर्नुभयो । स्विच अन हुनासाथ चिकाचिकीको चर्कै आवाज फेरी गुञ्जायमान भयो स्क्रिनमा दुईजना केटाले केटीलाई पुतीमा र चाकमा लाँडो छिराएर चिकिरहेका थिए । रुबीना अवाक् भएर फेरी आफ्नो कोठामा छिरी र ढ्याम्म ढोका लगाई । आमाले तत्कालै च्यानल चेञ्ज गर्नुभयो । मैले आमालाई अँगालेर आफूसित टाँस्दै भने “फिल्म त सहि दिएको रै’छ नि है आमा ।” आमाले कुनै उत्तर दिनुभएन । मैले आमाको र्याप ड्रेसको गाँठो फुस्काईदिएँ र आमाको पोका च्याप्प समाएँ । आमाको पारो छुटिरहेको रहेछ “तेरो बाउ आउने बेला भयो भन्ने थाहा छैन ।” अनि मेरो हात पन्छाएर जुरुक्क उठ्नुभयो अनि र्याप ड्रेसको गाँठो फेरी बाँध्नुभयो, म केहि बोलिन ।
आमाले बुबाको मोबाइलमा फोन डायल गर्नुभयो । निकै लामो घण्टिपछी बुबाको फोन उठ्यो । तर, फोन बुबाले नभई बुबाको कुनै साथीले उठाएको थियो र प्रत्युत्तरमा उसले अलि बाहिर पुगेको र धेरै समयपछी भेटेकोले भोली सबेरै पत्रिकासहित घरमै ल्याईदिने कुरा गर्यो । आमाले फोनलाई सोफामा हुत्याउनुभयो र सरासर माथी आफ्नै कोठातिर लाग्नुभयो । मैले मन्द ध्वनीमा फेरी त्यही च्यानल लगाएँ र कट्टुबाट लाँडो बाहिर निकालेर खेलाउँदै हेर्न थालें ।
केहिबेरमा आमा नाईटरोबमा तल आउनुभयो । मैले लाँडो खेलाइरहेको देखेपछी आमाले अति नै अनपेक्षित प्रश्न तेर्साउनुभयो “के तेरो बहिनी आएर चुस्दिन्छे कि भन्दै यहाँ लाँडो मुसारेर बसेको छस् ? तेरो बाउ नआउने भएसि माथी उक्लिन सक्दैनस् ।” मैले आमालाई आफूतिर तान्दै भनें “दुनियाका सब तरुनी एकातिर हजुर एकतिर । त्यसमाथी आज तपाईंको पुती हेर्ने दिन मलाई तपाई भए पुग्छ अरु कोही चाँहिदैन ।” स्क्रिनमा केटोले आमाजस्ती उमेरकी आईमाईको चाकमा लाँडो छिराएर चिकिरहेको थियो । मैले आमालाई सोफामा बसाएर आफ्नो लाँडोमा आमालाई झुकाउँदै आमाको र्याप नाईटरोब खोलिदिदैं भनें “अघिको र्याप ड्रेस र यसमा के नै पो फरक छ र ?” आमा अब नाङ्गै भईसक्नु भएको थियो । आमाले मेरो लाँडोलाई हातले समाउँदै भन्नुभयो “रुबीना निस्केली हिंड कि तेरो कोठामा कि माथी मेरो कोठामा... ।” “ह्या ! बुढीमाउ अब भोली बिहान नभई निस्कदिन त्यो तपाई खुरुक्क मेरो लाँडो चुस्नुस् ।” अनि आमाको मुखमा लाँडो छिराइदिएर आमाको टाउकोलाई तल-माथी गर्दै लाँडो चुसाउन मद्दत गरें । आमाले मेरो लाँडो चुस्दै गर्दा मैले आफूले लगाएको भेष्ट खोलेर त्यहीं सोफामा मिल्काएँ । निकैबेर आमालाई लाँडो चुसाइसकेपछी म आफू सोफामा बसें अनि आमालाई मेरो काखमा बसाएर चिक्न सुरु गरें । हल्का सित्कारका साथ आमा मेरो काखमा मच्चिन सुरु गर्नुभयो ।
घरिघरि म आमाको हल्लिँदै गरेको भरिलो बुब्सलाई घरि हातले खेलाउँथे त घरि मुखमा लिएर चुसिरहन्थें । हल्का थकानको महसुस गरेपछाडी आमाले मेरो मुखमा किस गर्नुभयो र छुट्टिँदै भन्नुभयो “यहाँबाट जा न, म तैले जे भनिस् त्यही मान्न तयार छु ।” आमाले साह्रै गरेपछी मैले आमाको पुती आफ्नो मुखमा जोडेर टिसी चाट्दै आमालाई घोप्टो पारेर बोकें ताकी आमाको मुखमा मेरो लाँडो परोस् । जब आमाले मेरो लाँडो चुस्दै मलाई साथ दिनुभयो मैले आमालाई त्यही अवस्थामा बोकेर भर्याङ्सम्म पुर्याए । त्यहीँ पोजिशनमा भर्याङ् चढ्नु सम्भव थिएन त्यसैले मैले आमालाई आफ्नो समकक्षमा उभ्याएर आमाको दाईने खुट्टा रेलिङ्गमाथी चढाएर पछाडीबाट आमाको पुतीमा लाँडो छिराएर चिक्न थालें । हामी आमा-छोरा पूर्णरुपमा नाङ्गै नै भर्याङमा रमाईरहेका थियौँ । म आमाको पुतीमा दुई-चार ठ्याक लगाउँदै हल्का रेलिङ्गमाथी उक्लदैं आमालाई चिक्दै गरिरहेको थिएँ । आमाको र मेरो कपडा सोफाको छेउमा छरपष्ट थियो र टि.भी.मा ब्लु-फिल्म चलिरहेकै थियो । मैले हल्का अगाडी बढ्दै आमालाई चिक्दै गर्दा बुबाको बिस्तरामा आमालाई उत्तानो सुताएर बिस्ताराको छेउमा आमाको पुती ल्याएर मज्जाले चिकिरहें । आमाले मलाई भरपूर साथ दिएर आफ्नो पुतीमा मेरो लाँडो लिईरहनुभएको थियो र अन्तमा मैले आमाको बुब्सभरी फुसी झारें । आमा उठ्न नसकेर त्यहीं निद्रामा लिन भएझै गर्नुभयो । म आमाको छेउमा समानान्तर सुतेर आमालाई चुम्बन गर्न थालें । केहिबेरनै आमाले मलाई झक्झकाउँदै भन्नुभयो “ओई केटा हाम्रो कपडा त तलै छ अनि टि.भी. त बन्द गर्या हो ?” मैले “अँह बन्द गर्या छैन...!” “के हो तेरो पारा त निको छैन नि ? मलाई त चिकिस् चिकिस् बहिनीलाई पनि चिक्ने दाउमा छस् कि क्या हो ?” “ह्या बुढीमाउ नचाहिने कुरा नगर्नुस्, म गएर ल्याइहाल्छु नि ।” म तुरुन्तै तल झरें र सबै कपडा बटुलेर टि.भी. बन्द गरेर आमाको छेउमा पुगेँ ।
भाग्यमानी छोरो : भाग ५ [Continue Reading]
भाग्यमानी छोरा : भाग ४ 'आमाको मुख हेर्ने दिनमा अर्कै चिजको दर्शन' 2017-09-02T13:47:00+05:45 Rating: 4.5 Diposkan Oleh: Miracle Teen Team
Miracle Nepal - Multilingual Sex Story Website: भाग्यमानी छोरा : भाग ४ 'आमाको मुख हेर्ने दिनमा अर्कै चिजको दर्शन'